रविन्द्र, महेश र गोकुलले उठाएका संघियता र धर्मनिरपेक्षताका सवाल, चुनावी एजेण्डाका फण्डा ! – Mission Khabar
रविन्द्र, महेश र गोकुलले उठाएका संघियता र धर्मनिरपेक्षताका सवाल, चुनावी एजेण्डाका फण्डा !
मिसन खबर १३ श्रावण २०७८, बुधबार १२:०९
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सोमबार संघीयताको खारेजीसँगै धर्म निरपेक्षताकाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघि सारे । आज नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले धर्म, संस्कृति र राज्यबारे छुट्टै बहस गर्नु पर्ने आशयको ट्वीट गरे ।
के वास्तवमा संघीयता नेपालको हित विपरित छ त ? २०६२/०६३ को जनआन्दोलन राजाले शासन हातमा लिएको विरुद्ध थियो वा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन थियो ? अनि संघीयताले नेता र कार्यकर्तालाई मात्रै शासक बनाएर राज्यमा आर्थिक भार थपेको हो त ? अहिलेको राजनीतिक खिचातानिले आम जनमानसमा यी प्रश्नहरु उब्जाएका छन् ।
जब जनआन्दोलन सफल बन्दै थियो, त्यही बेला शिर्ष नेताहरु बीच मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने अघोषित समझदारी पनि बनि सकेको थियो । तर, पनि कुनै रुपमा राजतन्त्र बचाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल नेताहरु बीच नभएका पनि होइनन् । जब जनआन्दोलन सफल भयो, सनातन कालदेखि बहुसंख्यक नेपालीले मान्दै आएको हिन्दु धर्मलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र रचियो । कतिपयले उठाएको प्रश्न र आरोपलाई सहि मान्ने हो भने केही देशी, विदेशी शक्तिको चलखेलमा २०७२ को संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । जनआन्दोलको समाप्ति कै वर्ष सुरु भएको मधेस आन्दोलनलाई शान्तपार्न मुलुकको शासन प्रणालीलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय गरियो । तर, ती निर्णयहरु नेपालको हितविपरित रहेको चर्चाले फेरि एक पटक मुलुकको राजनीति तात्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा नेता महेश बस्नेतले धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषयमा सोच्नु पर्ने आवाज उठाए लगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भविष्यमा अंगाल्ने राजनीतिको बिम्ब देखा पर्न थालेको थियो । बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष ओली कै चाहनामा आफूले त्यो धारणा राखेको बताएपछि नेपाली राजनीति केही तरंगित बन्दै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनले मुलुकको राजनीतिलाई तताइरहेको समयमा बस्नेतले छाडेको तरंग कमजोर बन्नपुग्यो । तर, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर मानिने विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रको बयानपछि संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयलाई वैकल्पिक राजनीतिक एजेण्डा बनाउने अभियानको थालनी भएको आँकलन गर्न थालिएको छ ।
संघीयता प्रति सधैँ कठोर रहँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि अब मुलुकको शासन प्रणालीमा परिर्वन हुनु पर्ने बताउँन थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्र नेता बाँस्कोटाले बस्नेत कै शैलीमा धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषयमा सोच्नुपर्ने बताएपछि एमालेले आगामी निर्वाचनमा यही नारालाई उचाल्ने सम्भावना बढेको छ । किनकी पार्टी अध्यक्ष ओली कै चाहनामा बास्कोटाको विचार बाहिरिएको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
ओली सत्तामा रहँदा प्रदेशप्रति देखाएको व्यवहारले पनि उनी संघीयतालाई रुचाउँदैनन् भन्ने पक्का भएको थियो । त्यसमाथि बारम्बार उनले संघीयता मुलुक सुहाउँदो शासन पद्धति नरहेको बताउँदै आएका पनि हुन । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने समेत मुलुकले अब संघीयता धान्न नसक्ने बताउँछन् । यी विभिन्न सवालहरुसँगै संघीयता कतै सेतो हात्ती त बन्दै छैन ? भन्ने प्रश्नपनि उठ्न थालेका छन् । जति उत्साहका साथ मुलुक संघीयतामा गएको थियो । अहिले राजनीतिक किचलो र तीन तहका सरकारमार्फत भएको प्रशासनिक खर्चले यो शासन प्रणाली मुलुकका लागि भार हो भन्ने आधारहरु बलिया रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । त्यसमाथि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकारहरुलाई सकुंचित पार्न थालेपछि संघीयताको आवश्यकता र औचित्यमै प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि ८० प्रतिशत भन्दा बढीले मान्ने हिन्दु धर्मको उपहास गर्दै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएपछि चिढिएको जमातको मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पनि अहिले संघयीताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताका कुरा नेतामार्फत मात्रै नभई दलगत रुपमै उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।
संघीयताको खारेजी र धर्मको नारा बोक्ने पुराना पार्टीहरुले जनताको मन जित्न नसकेको कारण वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउने प्रयासमा लागेका दलले तीनै तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा भोटको राजनीति कै लागि यो मुद्दा उठाएका हुन् वा संघीयताको व्ययभार बारे लेखाजोखा गरेर बोलेका हुन एकिन गर्न गाह्रो छ ।
संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रहसम्म जाने एजेन्डा नै कतिपय दलको अब हुने चुनावको नारा बन्ने पक्का जस्तै छ । मुलुकको संविधानको प्रस्तावनालाई नै संशोधन गर्नु पर्ने यी मागबारे तत्काल संवोधन हुने सम्भावना भने कतै देखिँदैन । तर, हरेक पार्टी भित्र र जनमानसमा बढ्न थालेको यो मागले भुसको आगो झैँ रुप लिने र भविष्यमा नेपाली राजनितिको फरक दिशा तय हुने संभावनालाई भने नकार्न सकिदैन ।